प्रेमी छैन दुखी आ”त्मा भएकी छु…. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/प्रेमी छैन दुखी आ”त्मा भएकी छु….
प्रेमी छैन दुखी आ”त्मा भएकी छु….
त्यति बेला गीत गाउने पालो गायक बद्री पंगेनीको आयो । पंगेनीले हातमा माइक समातेर भने जब सम्म गीत गाउँछु त्यो बेलासम्म नाच्नेलाई पुरस्कार दिनेछु। बद्रीले गीत गाउन सुरु गरे । अन्जली लगायतका धेरै सहभागी पुरस्कारको लागि नाच्न थाले । बद्रीले लगातार एकपछि अर्को गीत गाउँदै गए अरु सहभागीहरु थाके । तर अञ्जलीले अन्त्यसम्म नाचिरहिन् र ५ सय पुरस्कार पाइन् ।
त्यही मौकामा उनले बद्रीलाई आफ्नो नृत्यमा रुची हुनुका साथै म्युजिक भिडियो तथा चलचित्र खेल्ने रहर लागेको बताइन् । बद्रीले हुन्छ भन्ने आश्वसन त्यही कार्यक्रम दिएका थिए । कलाकार बन्ने ठुलो समपना बोकेर त्यही अनुरुप एसएलसीपछि भागेर काठमाडौं पुगिन । पढ्दा शिक्षक र साथीहरुले अन्जलीको नृत्यको प्रशंसा गर्थे तर परिवारमा आमाको मात्र समर्थन थियो । बुबा र दाइ म नाचेको पटक्कै मन पराउनु हुन्नथ्यो उनी सम्झन्छिन् ।
उनी काठमान्डौ पुगेर बद्री पंगेनीलाई सम्पर्क गरेपछि उनकै निरमाया दोहोरी साँझमा काम पाइन् । उनी भन्छिन् हिराले हिरा चिन्छ रे । उहाँले मेरो प्रतिभालाई चिन्नुभयो । भिडियो खेल्न घरबाट भागेकी अन्जली दोहोरी साँझमा नाच्न थालिन् । दोहोरी साँझमा काम गरेको भनेर नराम्रो नजरले हेर्ने अप्ठ्यारो पनि झेलिन् । तर दोहोरी साँझ नै उनका लागि नृत्य सिक्ने पाठशाला बनिदियो ।
एकवर्ष काम गरेपछि बद्रिले एउटा गीतमा मोडलिङ गर्ने अवसर दिए । बद्री र मिरा गिरीको स्वरमा रहेको खर बारीमा बोलको गीतमा अञ्जली पहिलो पटक देखिइन् । त्यो समय बद्री पंगेनीको गीतबाट डेब्यू गर्नु पनि उनको लागि ठुलो सफलता थियो । पहिलो भिडियोमा आफ्ना कमजोरी अञ्जलीले महशुस गरिन् । स्टेज र क्यामेरामा नाच्च फरक रहेछ अन्जली भन्छिन्, आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार्न थालेँ ।
बद्री पंगेनीले लगातार तिन पटक मौका दिएपछि अन्जलीलाई भिडियोमा अफर आउन थाल्यो । पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारीको तीज गीत मेरो माया बसेको ठाउँमा’मा अभिनय गरेपछि उनलाई दर्शकले चिन्न थाले । बोल मायाबाट व्यापकता अञ्जलीले काम गरेको करिब २०० भन्दा बढि भिडियोमध्ये आधामा प्रकाश सपुत पनि थिए । अन्जली जस्तै भिडियो मोडलिङमा जम्न खोजिरहेका प्रकाशले आफैं गीत लेखेर भिडियोका लागि मोडलहरुलाई अफर गरे तर धेरैले अस्विकार गरे ।
त्यसपछि उनले अञ्जलीलाई सम्झिए । त्यसबेला गाउँ पुगेकी अञ्जलीले गीत पठाउन भनिन् । घरमा त्यो गीत बजाउँदा बुबाआमासहित सबैले मन पराए । गीत मार्मिक थियो । त्योबेलासम्म बुबा र दाजुले पनि अञ्जलीको रुचीलाई सकारिसकेका थिए । उनले कोठामा एक्लै बसेर गीत बजाइन् र बेस्सरी रोइन् ।गीतमा डुबेर रोएपछि उनलाई लाग्यो म यो गीत गर्न सक्छु ।त्यसपछि उनले प्रकाशलाई फोन गरिन्, दाइ म यो भिडियो गर्छु ।
सारङ्गी रेटेर गीत गाएको सुटिङ सुरु हुँदै थियो । गाउँका धेरै मान्छे रमिता हेरिरहेका थिए । गीत बज्न थालेपछि सबैको आखाँ रसाए । अञ्जली र प्रकाशको पालोमा रोमान्टिक सिनहरु खिचियो । अन्जलीमा गर्न सक्छु सक्दिन भन्ने डर बढ्यो ।सिन खिच्न सुरु भयो । जब गीत बज्यो अञ्जलीमा भूत चडेजस्तो भयो । उनले साँच्चीकै रुदै सिन दिइन् जुन भिडियोमा आवश्यक थियो । साँच्चै रोएपनि मिलेको छ वा छैन् भन्ने डर थियो ।
सुटिङ सकियो सबैको मुहारमा चमक थियो । तर अन्जली खुसी हुन सकिरहेकी थिइनन् । जब भिडियो हेरिन् आफ्नो काम राम्रो पाइन् । अञ्जलीले अभिनय गरेको बोल माया को भिडियो सार्वजनिक हुन ६ महिना लाग्यो । तर, सम्पादनपछि तयार भएको गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैको पनि आँखा ओभानो रहेन । युट्युबमा भिडियो आएपछि तुरुन्तै ट्रेण्डिङमा पर्‍यो । धेरैले गीतमा आफ्नो कथाब्यथा पाए । सामाजिक सञ्जालमा गीत भाइरल भयो ।
आम नेपाली दर्शकहरुको मनमा बस्न सफल भयो त्यसपछि अञ्जलीको लागि कामको ओइरो आउन थाल्यो। बोल माया बोलको गीतले पाएको सफलतासँगै अञ्जलीको करियरले पनि ठूलो फड्का मार्‍यो । अहिले उनलाई परिवारको पनि राम्रो साथ अनि माया रहेको छ । अहिले अञ्जलीले अभिनय गरेको भिडियो छोरीले भन्दा पहिला सामाजिक सञ्जालमा उनका बाबाले खुशी भएर शेयर गरिदिन्छन् ।
गाउँटोलमा छोरीको प्रशंसा गर्दा बाबाको नाम फुलिएको छ भन्छिन्अञ्जली । त्यसपछि त अन्जलीलाइ पछि फर्किन परेन गलबन्दी गीतले त झनै सिखार्मै पुरायो। केही फरक प्रसंगमा उनले भनेका छन अहिले मेरो प्रेमीका छैन दुखी आत्मा भएको छु । अनलाईन खबरको सहयोगमा
कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना सम्पर्क नम्बर सहित